Samsung မှတရားဝင် Android 6.0 | Androidsis ပါ
တရားဝင် Samsung မှ Android 6.0 Marshmallow သို့အဆင့်မြှင့်တင် Samsung Galaxy S5 ကိုချန်လှပ်ထားသည်
Francisco Ruiz | | NOTICIAS, Samsung, Android ဗားရှင်း
မင်းမှာကြီးကျယ်တဲ့ကိုးရီးယားနိုင်ငံစုံမှ Android terminal တစ်ခုရှိပါသလား။ အဖြေကဟုတ်တယ်ဆိုရင်အားလုံးသေချာသိဖို့စိတ်ဝင်စားလိမ့်မယ် Android Marshmallow သို့အဆင့်မြှင့်တင်မည့် Samsung terminal များဒါမှမဟုတ်အတူတူဘဲ၊ ငါ့ Samsung က Android 6.0 Marshmallow ကို update လုပ်မှာလား။
ရုံကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့် «ဤစာကိုဆက်ဖတ်ပါ။အကြောင်း၊ သင်သိလိမ့်မည် Samsung သည်၎င်း၏တရားဝင် update ကို Android 6.0 Marshmallow သို့အာမခံပေးသောလက်ရှိ terminal များကိုရီးယားနိုင်ငံစုံ၏နောက်ဆုံးပေါ် terminal များအပါအ ၀ င်စာရင်းတစ်ခုအပါအ ၀ င်၎င်းတွင်ကုမ္ပဏီ၏အဆင့်မြင့်သို့မဟုတ်အလံများဟုမမှတ်ယူသောအခြား terminal များလည်းပါ ၀ င်သည်။
1 ပထမဆုံး၎င်း၏အထင်ကရ terminal များ (သို့) မကြာသေးမီကထုတ်လွှင့်မှုများ
ပထမဆုံး၎င်း၏အထင်ကရ terminal များ (သို့) မကြာသေးမီကထုတ်လွှင့်မှုများ
ပထမအသုတ်တွင်ဖြစ်သည် Samsung ကတရားဝင် Android 6.0 Marshmallow သို့အဆင့်မြှင့်တင်လိုက်သည်ယုတ္တိရှိသည်နှင့်ဖြစ်နိုင်သည်နှင့်အညီ၊ ကုမ္ပဏီ၏ flagship များဟုလူသိများသောနောက်ဆုံးပေါ် terminal များရှိသည်။ Android 6.0 Marshmallow သို့ update လုပ်ရန်ပထမဆုံး terminal များစာရင်းတွင်အောက်ပါ Samsung device များကိုတွေ့သည်။
Samsung ရဲ့ Galaxy S6 Edge +
Samsung ၏ Galaxy Note ကို 5
Samsung ရဲ့ Galaxy S6 အစွန်း
၎င်းတို့သည်နှစ်ရှည်လများစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသောတရားဝင် update ကိုလက်ခံရရှိမည့်ပထမဆုံး Samsung terminal များဖြစ်သည် ဇန်နဝါရီ / ဖေဖော်ဝါရီ၌ Android 6.0 Marshmallow ကိုပြန်လည်ရရှိခဲ့သည် လာမယ့်နှစ်၊ နောက်နှစ် ၂၀၁၆ ကိုပြောတာ။
Android 6.0 Marshmallow သို့တရားဝင် update ရရှိမည့်ဤဒုတိယအသုတ်တွင် Samsung terminal များ၊ ကြီးစွာသောပျက်ကွက်မှုသည် Samsung Galaxy S5 ဖြစ်သည်မှာသေချာသည် Samsung အတွက်တာဝန်ရှိသူများထံမှတရားဝင်အတည်ပြုချက်မရရှိပါက၎င်းသည်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောတရားဝင် Android update ကိုလက်ခံရရှိရန်ရွေးချယ်ထားသော terminal များထဲမှတစ်ခုမဟုတ်ပါ။
ဆန့်ကျင်တွင်, သူတို့၏မျှော်မှန်းထားသော Android Marshmallow ဆေးကိုလက်ခံမည့် terminal များ ဂုဏ်ကျက်သရေအတွက်အောက်ပါကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
Samsung ၏ Galaxy Note ကို4(ဆံပင်အားဖြင့်)
Samsung ရဲ့ Galaxy Alpha
Samsung ၏ Galaxy Tab ကိုတစ်ဦးက
ကွင်း၏ကွင်း၌ကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းထားသည် ဆံပင်အားဖြင့် Samsung Galaxy Note4တွင်ဤကြီးကျယ်သော Android terminal ၏သက်တမ်းတစ်နှစ်ကျော်သာရှိသည်၊ ၎င်းသည် Samsung ၏အလေးချိန်ကိုအလေးချိန်ပေးလျှင်ပင်သိသာထင်ရှားသည်။ Android ဗားရှင်းအသစ်များအတွက်တရားဝင်အပ်ဒိတ်များစာရင်းတွင်၎င်းကိုဟုတ်ကဲ့ (သို့) ဟုတ်ကဲ့ထည့်ရပါမည်ထုတ်ကုန်စတင်ခြင်း၏တစ်နှစ်ခွဲအထိဤသည် Android terminal ထုတ်လုပ်သူအားလုံးအတွက်ရှေ့ဆက်ရန်နည်းလမ်းဖြစ်သင့်သည်။
ဒါဟာအပြောင်းအလဲတွေရဲ့ပထမဆုံးမှာသူတို့လိုမျိုး terminal ကြီးတစ်ခုရဲ့နောက်မှာကျန်ခဲ့တာနဲ့အတူတူဘဲ Samsung ရဲ့ Galaxy S5 Samsung မှတရားဝင်အတည်ပြုချက်မရရှိပါက၊ သူစောင့်ခဲ့ဖူးသော Marshmallow ဆေးပမာဏမှထွက်ရန်ဂဏန်းအားလုံးရှိသည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Samsung » တရားဝင် Samsung မှ Android 6.0 Marshmallow သို့အဆင့်မြှင့်တင် Samsung Galaxy S5 ကိုချန်လှပ်ထားသည်
ဒါဆိုရင်ငါ S6 ကိုမကြာခင်ရောင်းရတော့မယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့အမှန်တရားကလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ်ခွဲက terminal မှာ S5 ကအတော်လေးစွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းမပါဝင်တာကြောင့်၊ အဲဒါက Samsung က S7 ကိုစဖွင့်လိုက်တာနဲ့အဲဒါကိုမြင်နိုင်တယ်။ S6 ရှိသူငါတို့အားလိမ်ညာလိမ့်မည်။ S6 မှာပါ ၀ င်တဲ့လုပ်ဆောင်ချက်အချို့မရှိပေမယ့် Google ကအာမခံချက်ရှိပြီးအတော်လေးမြန်ဆန်တဲ့အပ်ဒိတ်တွေရလိမ့်မယ်လို့ Nexus 6P ကို ​​၀ ယ်တာအကောင်းဆုံးဘဲ။
David alberto ဟုသူကပြောသည်
.l Samsung ကိုနှိပ်ပါ
David Alberto အားပြန်ပြောပါ
ပထမတစ်ခုက S6 ဆိုတာငါနားလည်တယ်။ ကျန်တာတစ်ခုက S5 ပါ။
Antonio Castillo နေရာလွတ် ဟုသူကပြောသည်
Antonio Castillo သို့ပြန်သွားပါ
ကောင်းပြီ၊ ငါ Samsung ကိုအံ့သြသွားလိမ့်မယ်။ ၎င်းသည်စိတ် ၀ င်စားစရာအကောင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအလွှာနှင့် android စကြာဝentireာတစ်ခုလုံးတွင်အစိတ်စိတ်အမြွှာမြွှာခွဲခြားနိုင်သောအကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။
Snapdragon5နှင့် Ram 801 Gb ပါသော S2 ကဲ့သို့ဖုန်းများကို Android6သို့မွမ်းမံနိုင်ခြင်း၊ nexus သို့မဟုတ် Sony၊ Z စီးရီး၊ Motorola (၎င်း၏ဗားရှင်း ၃ မျိုး၊ E၊ G နှင့် X)၊ HTC တို့ကဲ့သို့တူညီသောအင်္ဂါရပ်များ ဒါမှမဟုတ် update လုပ်ရင်ပိုနိမ့်တယ် ... Samsung အတွက်အရမ်းဆိုးတယ်။ တစ်နှစ် (သို့) တစ်နှစ်ခွဲအတွင်းသူ့ကုမ္ပဏီကအသုံးမ ၀ င်တဲ့ terminal တစ်ခုအတွက်ငွေပေးချေမှုကိုဘယ်လိုသုံးမလဲ။
ကျွန်ုပ်၏အမြင်၌မည်သည့် terminal ကို ၀ ယ်ရမည်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသောမည်သည့်သုံးစွဲသူကိုမဆိုကုမ္ပဏီသည်အနည်းဆုံးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမပေးသောထို terminal များကိုစွန့်ပစ်သင့်သည်။ ဤသဘောအရ Samsung သည် Apple ကုမ္ပဏီကို Apple ပရိသတ်များကဲ့သို့တန်ဖိုးထားသောသူများကိုတန်ဖိုးမထားဘဲ Samsung သည်အလွန်ပျက်စီးလိမ့်မည်။
ဒါပေမယ့်ဟေ့၊ သူက churros တွေလိုလူတွေကို ၀ ယ်ဖို့truñosတွေကိုဖန်တီးဖို့သူ့အရာကိုလုပ်တယ်။ ကျွန်တော့်အတွက် S4၊ Snapdragon 800 (Nexus5ကဲ့သို့စွမ်းဆောင်ရည်) ရှိသောဗားရှင်းရှိကတည်းက CyanogenMod အကြီးကြီးကို ၀ တ်ရပါမည်။ ဤအရာသည် Android Community အတွက်အလွန်ကောင်းသောအလုပ်ကိုလုပ်သည်။ အနာဂတ်မှာ Samsung, Motorola (သို့) Nexus မှဘာမျှမရှိ။ သူငယ်ချင်းများနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသို့ငါအကြံပေးမည်။
Luis Conde ဟုသူကပြောသည်
အကယ်၍ ယခုနှစ်အစမတိုင်မီအထိ Samsung သည် s5 အတွက်မျက်နှာသာပေးခဲ့သည်
Luis Conde သို့ပြန်ပြောပါ
Jhoffre မေပယ် ဟုသူကပြောသည်
Jhoffre Arce အားပြန်ပြောပါ
Vte Bosch ပါ ဟုသူကပြောသည်
သူတို့ s5 ကိုထွက်သွားတာကောင်းတယ်လို့ငါမထင်ဘူး။ ၂ နှစ်အကြာမှာဒီဖုန်းတွေကိုဘယ်သူမှမ ၀ ယ်ဘူးလား။ စတင်ထုတ်လုပ်ပြီးနှစ်နှစ်အကြာတွင်မည်သည့် update ကိုမရထိုက်သနည်း။
Vte Bosch သို့စာပြန်ပါ
ဟိုဆေးအန်တိုနီယို Martinez Morales ဟုသူကပြောသည်
ငါဒီအကြောင်းကိုသိခဲ့ရင်စက်တင်ဘာလမှာငါ ၀ ယ်ခဲ့မယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါဘယ်လိုလုပ်မလဲ၊ အဲဒါကိုလုပ်ရင်ဖောက်သည်များစွာဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မယ်။
jose antonio martinez morales အားပြန်ပြောပါ
Alejandro Del Nogal ဟုသူကပြောသည်
s600 တွင်ဒေါ်လာ ၆၀၀ နှင့်ယခု update မကုန်သေးပါ။ တရုတ်လက်ကိုင်ဖုန်းများအသက်ရှည်ပါစေ !!!
Alejandro Del Nogal အားပြန်ပြောပါ
Julian Huerta Crespo နေရာယူပုံ ဟုသူကပြောသည်
Julian Huerta Crespo သို့စာပြန်ပါ
Eliass Kharkhach ဟုသူကပြောသည်
#MEIZU Long အသက်ရှည်ပါစေ
Eliass Kharkhach ကိုပြန်ပြောပါ
Francisco Muñoz ဟုသူကပြောသည်
Samsung ... = အလယ်အလတ်
Ana Vasquez ဟုသူကပြောသည်
iPhone ကိုသုံးပါ၊ သင်၏ပြသနာများပြီးဆုံးလိမ့်မည်
ဒီလောက်မိုက်တဲ့အိုင်ဖုန်းတွေကို ၀ ယ်တာထက်ခေတ်မမီတော့တဲ့ဖုန်းကိုငါသိမ်းထားချင်ပါတယ်။
s6 မှ s5 သို့ခွဲရန်များစွာကွာခြားမှုမရှိသောကြောင့်၎င်းအားသေချာစွာစိတ်မပူပါနဲ့။ ဒါဟာမတရားဘူးလို့လည်းပြောနိုင်ပါတယ်။ ငါရိုးရိုးသားသားဘဲဒါက s5 ကိုမွမ်းမံမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောထားတဲ့တစ်ခုတည်းသောစာမျက်နှာပါ။ အဲဒါကြောင့်စိတ်အေးအေးထားပြီးမျှော်လင့်ပါတယ်။ ဟားဟားငါ s4 အထိငါ xd ကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မယ်လို့ငါထင်ခဲ့တယ်။ ဤအရာကိုဖန်တီးသူပြောသောမဆန်သောအရာ
Nexus ကဲ့သို့သန့်ရှင်းသော android ကိုမသုံးသောမိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများ ၀ ယ်ခြင်းကြောင့်သင်ထိုသို့ဖြစ်သွားသည်။ သို့သော်အရာအားလုံးတွင်အဖြေတစ်ခုရှိသည်။ သင်၏ S5 ကို root လုပ်ပြီး S5 အတွက် Marsmallow ကိုလွှတ်ပေးမည့် Cyanogenmod ကို install လုပ်ပါ
vlvaro Venegas အေ ဟုသူကပြောသည်
Samsung ကသူ့ရဲ့ terminal တွေကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရာမှာမကောင်းဘူးဆိုတာငါအမြဲသိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် S5 ကိုချန်ထားခဲ့တယ် (ဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံးတော့ငါယုံချင်တယ်) ။ ယခုအချိန်တွင် Samsung သည် S5 အတွက် update ကိုငြင်းပယ်ခြင်းမရှိသေးပေ (စျေးကွက်၌တစ်နှစ်နှင့်တစ်နှစ်ခွဲသာရှိသေးသော terminal တစ်ခုအားစွန့်ပစ်ခြင်းသည်ရယ်စရာကောင်းသည်) နှင့် Tab S နှင့် ပတ်သက်၍ ဘာမှမပြောခဲ့ပါ။ Tab S2 အသစ်သည်သူစာရင်းကိုထုတ်ဝေသည့်အချိန်တွင်သူသည်ဗားရှင်း ၅.၀.၂ ဖြင့်ဈေးကွက်၌ဖြန့်ချိခဲ့ပြီးဖြစ်သည်
vlvaro Venegas A ကိုဖြေပါ။
ဆန်တီယာဂို Serrano ဟုသူကပြောသည်
S5 ၏ cyanogen mod နှင့်ပြောင်းလဲရန် SXNUMX ၏အလှည့်ဖြစ်လိမ့်မည်၊ ၎င်းတို့သည် android ဗားရှင်းအသစ်များသို့မွမ်းမံခြင်းသို့မဟုတ်ရင်ငါတို့ကို manzanita သို့ပြောင်းလဲစေသောအရာများစွာကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်ဟုငါ့ကိုထင်သည်။
Santiago Serrano သို့ပြန်ပြောပါ
သူတို့က block ကိုမ update ဘူးဆိုရင်၊ ငါ့မိသားစုတစ်စုလုံး၊ သူငယ်ချင်းတွေအများကြီးသွားလိမ့်မယ်
၂.၁ တွင် Steam သည်အသစ်ပြောင်းခြင်းတစ်ခုရရှိသည်။ ပစ္စည်းအရောင်းအ ၀ ယ်၊ ဂိမ်းအချက်အချာ၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်အခြားအရာများ
Benchmarks အသစ်များသည် ၁၈ လက်မအရွယ်ရှိ Samsung Galaxy တက်ဘလက်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်